Xog aruurinta Jidka loo yaqaan Cafimaad ku sugnow ee Lake City Survey
Xog aruurinta Jidka loo yaqaan Cafimaad ku sugnow ee Lake City
1. Kor Mar
English Español (Estados Unidos) Soomaali Русский العربية አማርኛ
Bishii Abriil 2020 ee la soo dhaafay, iyada oo qayb ka aheed gurmadka degdegga ah ee COVID-19, waxaan xirgelinay 26 mayl oo Jidadka loo yaqaan Caafimaad ku sugnow (Stay Healthy Streets).Jidadka waxaa logu talagaly in dadku ku jimicsadaan oo kuna lugeeyaan oo baaskiil ka racaan maraky aadayaan dukaamada raashinka, farmasiyada, iyo meheradaha si dadka ya u kala fogadaan 6 fudh.
Waxaan jeclaan lahayn inaan maqalno ra'yi gaaga ku saabsan Jidka loo yaqaan Cafimaad ku sugnow ee bulshadaada ku dhexyaal. Tan waxay naga caawinaysaa sidii aan u fahmi lahayn in wadooyinka u shaqeyniyaa sidii la rabay iyo hadii loo baahanyahay in laga dhigo mid joogta ah.
La xiriir SDOT su'aalaha, faallooyinka, iyo fikradaha: StayHealthyStreets@Seattle.gov I (206) 735-8295
Macluumaadka lagu bixiyay xog aruurintan waxaa loo tixgeliyaa inay tahay diiwaanka dadweynaha waxaana laga yaabaa in lagu soo bandhigo dadweynaha hortooda haday codsadaan. Wixii macluumaad oo dheeri ah, fadlan eeg Xeerka Diiwaanka Dadweynaha, RCW Cutubka 42.56 . Si aad kaga ogaato wax badan oo ku saabsan sida aan u maamulno macluumaadkaaga, Fadaln eeg Qoraalkayaga Qarsoodiga .
* 1. Jidadka loo yaqaan Cafimaad ku sugnow, kee baad adiga iyo qoyskaaga aad inta badan isticmaashaan?
Aniga waxaan inta u badan isticmalaa jidka cafimad ku sugnow ee "A"
Aniga waxaan inta u badan isticmalaa jidka cafimad ku sugnow ee "B"
Labadaba waan isticmaalaa
Anigu ma isticmaalo Jidadka loo yaqaan Cafimaad ku sugnow
* 2. Jidadka loo yaqaan Cafimaad ku sugnow, kee baa kugu dhow?
Aniga waxaan ag deganahay jidka cafimad ku sugnow ee "A"
Aniga waxaan ag deganahay jidka cafimad ku sugnow ee "B"
Waxaan u dhexeeyaa labada waddo
Anigu kuma nooli meel u dhow labada jid
* 3. Ma rabtaa inaad Jidadka loo yaqaan Cafimaad ku sugnow ee nooca "A" aad ka dhigtid mid joogto ah?
Qeybtan sida ay maanta tahay u daa, waxna hana ka beddelin
Qeybtan daa lakiin hagaaji
Qaybtan si ku meel gaar ah saar lakiin soo celi markii mustaqbalka la hagaajiyo
Si joogto ah qaybtan ka saar
* 4. Ma rabtaa inaad Jidadka loo yaqaan Cafimaad ku sugnow ee noco "B" aad ka dhigtid mid joogto ah?
* 5. Sideed u isticmaashaa Jidadka loo yaqaan Cafimaad ku sugnow (Calaamadee dhammaan inta haboon)
La socdo iyo
Baskiil la wato
Gaari la wado
Shaqo oo la soo dhamaysto
Fadlan faahfaahi ka bixi
* 6. Amni ma dareentaa markaad isticmaalayso Jidadka Cafimaad ku sugnow?
* 7. Hadday maya tahay, maxay aaggaasi ku dareensiinaysaa inaad ammaan ahayn?
Gawaari aah u badan
Gawaarida oo si dhakhso badan ku wado
Baaskiilada oo aan dadka boos la wadaagenin
Isgoysyada leh waddooyin ceriiri ah
Calaamadihii ayaa hoos u dhacay
Cabsida rabshadaha jinsiyada
Isdhexgalka dadka gardarada badan ee xanaaqsan
Dadka oo aad u badan, cabsi laga baqaya inuu kugu dhaco COVID-19
Jidka lagu socdo/wadooyinka waxay u baahan yihiin in la hagaajiyo
Mid kale (fadlan sheeg)
* 8. Wadada Cafimaad ku sugnow ka xagee ayaad dareentaa ammaan la'aan? Fadlan isticmaal khariida hoose si aad u xulato meelaha aad dareento inaysan amaan ahayn. (kuwa haboon dhamaan calaamadee )
* 9. Waa maxay hagaajinta kale ee aad jeceshahay inaad ku aragto magaalada?
Meelal ka fiican ee roobka ka bahdo
Darawalada yar oo gooya
Beerta oo la badiyo
Fududee in la gudbo
In Calaamadaha wadada la hagaajiyo
* 10. Si aad u hesho iimaylaha ugu dambeeyo ee ku saabsan Jidadka loo yaqaan Cafimaad ku sugnow, fadlan iimaylkaaga hoos ku qor.